Wax kasta oo ku saabsan Nolvadex
1.Waa maxay Nolvadex? Sidee u shaqeysaa? 2. Nolvadex wuxuu isticmaalaa
Qiyaasta 3.Nolvadex Natiijooyinka 4.Nolvadex
5.Nolvadex nus-nolosha 6.Nolvadex waxyeelo-soo-saarka
Faa'iidooyinka 7.Nolvadex Dib u eegista 8.Nolvadex
9.Nolvadex iibka 10.Nolvadex si loo daweeyo dhalmo la'aanta dheddigga
1. Waa maxay Nolvadex? Sidee u shaqeysaa?
Xilligan, kansarka naasku waa mid ka mid ah cudurrada ugu badan ee dumarka u xanuunsanaya. Daraasado badan ayaa la sameeyay waxaana wali lagu sameeya daroogooyinka kuwaas oo ka caawin kara in qofku noolaado nolol aan kansar lahayn. Nolvadex (54965-24-1) waa mid ka mid ah daaweynta lagu xaqiijiyay inay faa'iido u leedahay ka-hortagga iyo daaweynta kansarka naasaha. Marka laga reebo in macaashku uu helo meel ka mid ah marxaladda caalamiga ah.
Nolvadex (54965-24-1) waa kaniin afka ah oo wax ku ool ah daaweynta bukaanada qaba kansarka heerarka sare. Waxaa laga helay 1966, iyo daraasaddeedana ah daaweynta daaweynta kansarka ayaa bilaabatay 1970. 1998, waxay noqotay daroogada ugu horreysa ee lagu helo oggolaanshaha FDA si looga caawiyo ka hortagga kansarka naasaha. Cilmi-baaris la sameeyay ayaa muujisay in Nolvadex ay yareeysay fursadaha ay ka haysato kansarka naasaha by 50% dumarka halis sare ugu jira inay horumariyaan.
Si aad u fahamto sida Nolvadex u shaqeyso, waa inaad ogaataa in unugyada kansarka naasaha ay u baahan yihiin hormoon haween ah oo loo yaqaano estrogen si ay u koraan uguna dhufto. Tamoxifen waa, sidaas darteed, awood u leh inay xakameyso tan adigoo ku tartamaya estrogen oo ku xiran reseptors in unugyada kansarka naasaha.
Nolvadex (54965-24-1) ayaa si rasmi ah loogu magacdarey sida xakameyn xaddidan oo loo yaqaan 'estrogen receptor modulator' (SERM). Sidaas daraadeed, waxay yareysaa kobaca iyo dhalashada unugyada kansarka naasaha iyagoo xakameynaya estrogen naaska.
Marka laga reebo Nolvadex dagaalka estrogen ee unugyada kansarka naasaha, waxay sidoo kale nuqul ka bixiyaan saamaynta togan ee ay keenaan habdhiska jirka. Dumarka postmenopausal ee ku jira tamoxifen, waxay yareyn kartaa khatarta cudurada wadnaha iyo sidoo kale osteoporosis (xaalad keenaysa lafaha lafaha) iyada oo aan loo marin daaweynta hormoonka bedelida.
2. Nolvadex wuxuu isticmaalaa
Nolvadex waxay isticmaashaa tan iyo markii ay da'da ku jirtay daaweynta xaalado kala duwan. Waxay u muuqataa inay tahay badbaadiye raga ugu badan ee ragga iyo dumarka qaba cudurrada noocaas ah ugu yaraan hal mar noloshooda. Waa kuwan qaar ka mid ah Nolvadex wuxuu isticmaalaa oo dhisay meel u dhow.
Nolvadexmay waxaa loo qoraa ragga iyo dumarka labadaba iyada oo loo daaweynayo qanjidhada nukliyeerka ama lenf-naas-kansarka naasaha ka dib markii ay heleen qaliin guulaystay. Isticmaalka Nolvadex ayaa loo xaqiijiyay in uu faa'iido badan yahay marka la macaamilayo kansarka oo leh hindhiso hormoon ah oo hormoon ah iyo hormoonada hormoonka ah ee progesterone. Nolvadex waxay hoos u dhigtaa khatarta kansarka u gudbineysa naaska ka soo horjeeda.
Ragga iyo dumarka qaba kansarka naasaha ee kiciya (kansarka oo faafay) ayaa lagu qori karaa Nolvadex.
Dumarka ku dhaca dhuunta ductaloma in situ (DCIS) iyo kuwa hore u maray qalliinka iyo daaweynta shucaaca waxay ka faa'iideysan karaan daawadan. Xaaladdan oo kale, Nolvadexmay waxay hoos u dhigtaa khatarta ay leedahay dhibaatada kansarka naasaha. Si kastaba ha ahaatee, khatarta iyo faa'iidada leh ee daaweyntaas waa in, si kastaba ha ahaatee, laga wada hadli doono kahor.
Dumarka khatarta ugu jira inay ku dhacaan kansarka naasaha ayaa sidoo kale loo qori karaa daroogada si ay uga caawiyaan ka hortagga suurtagalnimada in la helo. Si kastaba ha noqotee, khatarta iyo faa'iidada daaweyntaas waa in, si kastaba ha ahaatee, laga wada hadlo kiiskan.
Mid ka mid ah kuwa aan caadi ahayn Nolvadex ayaa isticmaala daaweynta kansarka ugxan-sidaha.
3. Qiyaasta Nolvadex
Qiyaasta Nolvadex uma baahna inay aad u sarayso si ay u shaqeyso; waa SERM xooggan oo si fiican u shaqeeya qiyaas yar. Daaweyn caafimaad, caadi ahaan Qiyaasta Nolvadex waa 10-20mg, kaas oo la qaato laba jeer maalin kasta.
Daawada hormoonada hormoonada iyo hormoonada hormoonka ah, qiyaasta Nolvadex waa inay u dhaxeysaa 10-40mg maalintii. Qiyaasta aad doorato waxay kuxirantahay xajmigaaga, yoolalka, iyo xaddiga waqtiga aad rabto inaad ku jirto.
Waxaa fiican in la ogaado in qiyaasta sare ee Nolvadex aysan micnaheedu ahayn saameyn wanaagsan. 10-40 mg ayaa ku siin doona saameyn weyn oo degdeg ah oo aad u baahan tahay in la yareeyo saamaynta halista ah ee qaadista steroids anabolic.
Ma jiraan tixgelin gaar ah oo laga qabo maamulka Nolvadex. Waa doorasho aad ku qaadato ka hor, ka dib, ama xilliyada cuntada. Waxaad sidoo kale heli kartaa subaxda ama waqtiga habeenkii. Mararka qaarkood waxaa lagula talinayaa in aadan kala qaybin qiyaasta Nolvadex.
4. Natiijooyinka Nolvadex
Nolvadex wuxuu keenayaa ka hortagga kansarka inay ka mid yihiin kuwa ugu fiican marka loo eego daawooyinka kale ee kansarka. Natiijooyinka waxay muujinayaan 50% hoos u dhaca dumarka loo daweeyey labadaba kansarka naasaha iyo kuwa non-invasive. Inay qaadato muddo shan ilaa toban sano ah ayaa cadeeyay inay yaraynayso dib-u-dhaca kansarka naasaha iyo sidoo kale halista naas kale oo qaadsiin karta.
Nolvadex waxay sidoo kale ka dhigeysaa xal aad u fiican daaweynta ginecomastia labadaba sida daroogada ka hortagga ah iyo daaweynta hore ee hore ee horumarinta isla. Daraasad gooni ah oo lagu sameeyay toban bukaan ah hal bil gudaheed, todoba kamid ah waxay la kulmaan hoos u dhac ku yimaada xajmiga naasahooda. Afar ka mid ah oo ka mid ah xanuunkii gynecomastia ee xanuunku haleeshay ayaa heley gargaar. Ma jiraan wax sun ah oo la soo sheegay.
Waxay sidoo kale bixisaa natiijooyin aad u fiican oo ku saabsan kicinta wax soo saarka testosterone sida lagu soo warramey in ay ku noqdaan caadi kadib afar toddobaad.
5. Nolvadex Nolosha Nolosha
The Nolvadex Nolosha Nolosha waa mid aad u dheer marka la barbar dhigo xeryaha kale ee afka laga qaato. Waxay qiyaastii shan ilaa toddoba maalmood la socotaa daraasado muujinaya in Nolvadex kala bar nololeed uu socon karo illaa afar iyo toban maalmood.
6. Nolvadex waxyeelo soo wajahda
Nolvadex waa daroogo lagu soo bandhigay in ka badan konton sano ka hor, mana aha wax la yaab leh in kastoo waxoogaa waxbaa lagu barto si ku filan. Waxay leedahay faa'iidooyin badan, laakiin waxaa jira sidoo kale Nolvadex waxyeelo soo wajahda taas oo ku dhibaysa. Hase yeeshee, micnaheedu maahan in marka aad bilowdo inaad qaadato, waa inaad qaadataa saameynta dhinaca Nolvadex. Waqtiga intiisa badan, marnaba kuma dhici kartid mid ka mid ah.
Badanaa, saameynta dhinaca Nolvadex waa mid la saadaalin karo marka loo eego bilawga iyo inta ay kugu dhicin doonaan. Sidoo kale waa muhiim in la ogaado in dhibaatooyinka soo noqnoqda had iyo goorba ay noqdaan kuwo is beddeli kara mar walbana way kaa tagaan markaad daaweynaysid.
Marka aad maqasho jirkaaga, waxaad ogaan doontaa in waxyeelada daawadu ay ku xumaan karto xaaladaha qaarkood, waxaad yareyn kartaa ama ka hortagi kartaa adiga oo sameynaya isbeddello. Qaar ka mid ah waxyeelooyinka caadiga ah waxaa ka mid ah;
La yareeyey libido
Qofna ma doonayo in uu sariirta ku liito, gaar ahaan haddii aad si wanaagsan u sameysey. Inkasta oo mid ka mid ah faa'iidooyinka Nolvadex ay tahay in ay kordhiso heerarka testosterone, waxa kale oo ay awood u leedahay yareyneysa midabtakoorka jinsiga. Daraasadaha la sameeyay waxaa ay muujiyeen in qaar ka mid ah dadka isticmaala Nolvadex ay ka cabanayeen libido hoose, halka kuwa kale, ay noqdaan kuwo aan jirin.
Timo la'aantu waxay noqon kartaa xanuun. Nasiib darro, waa dhacdo joogto ah iyadoo la adeegsanayo Nolvadex.
Barar gacmaha, canqushaha, iyo cagaha
Waa kuwan waxyeelooyinka Nolvadex ee u baahan daaweyn degdeg ah;
Dareemidda niyad-jabsan (oo aan awoodin inaad si caadi ah u fuliso hawlahaaga maalin walba)
Lalabbo (oo aan awoodin inuu cuno ama dareemo in la naaquso xitaa marka uu qaato dawada loo qoray)
Dheecaan hoosta haweenka ah oo ay weheliso dhiigbax, xanuun iyo caadada caadada
Naaso cusub oo cusub.
Barar, xanuun, ama guduudasho mid ka mid ah lugaha ama gacmaha iyo kuwa kale
7. Faa'iidooyinka Nolvadex
Waxay yareyneysaa ginecomastia
Dad badan ma arkaan ginecomastia ama nin boobs ah xaalad daran, laakiin dareen dhab ah waa. Waa horumarinta unugyada naaska ee ragga. Caadi ahaan, waxaa keena isbeddel ku yimaada hoormoonka mid ka mid ah sababaha da 'ahaan ama isticmaalka steroids.
Xaaladdan, kororka saamiga estrogen / testosterone waxay noqon kartaa sababta ugu weyn. Sidoo kale, kicinta xayawaanka estrogenic ama hoos u kaca ee quudinta iyo korriinka iyada oo loo marayo isdhexgalka estrogen ama orrogen ayaa noqon kara sabab.
Ragga oo ka cabanaya ma arkayaan isbedelka muuqaalka muuqaalka ah, laakiin waxay sidoo kale keeni kartaa waxyeelo maskaxeed. Marka laga reebo luminta kalsoonidooda, waxay ka dhigi kartaa mid niyad-jebin kara marka la rabo in la xakameeyo naftiisa. Xitaa way ka sii xumaatay, waxay ku dadaali kartaa inay isku dhejiyaan iyaga oo sidaan u socdaan joornaalo weyn oo ka fogow waxqabadyo muujin kara jirkooda, sida dabaasha.
Maalmahan, niman badan oo qaba xaaladdan marwalba waxay ku jiraan baaritaanka xal waara. Waxyaabaha wanaagsani waa, mid ka mid ah Faa'iidooyinka Nolvadex waa in uu hoos u dhigo naasaha waaweyn ee weyn iyada oo aan midna ku dhicin waxyeello daran. Nolvadex, ayaa sidaas darteed, waxay bixisaa ikhtiyaarka amniga iyo waxtarka leh ee daaweynta qaar ka mid ah kiisaska gynecomastia.
Nidaamka helitaanka qulqulka muruqyada uma muuqdaan wax adag. Dhammaan wixii lagaa waydiiyey waa in aad kor u qaaddid miisaanka, ku jir cuntooyinka saxda ah, oo aad qaadatid dhererka jirka jirka ee ugu fiican. Ma yaabtay waxa aad sameyn kartid haddii aad ku dhufatey daroogada? Waa kuwee alaabada aad isticmaali karto haddii aad u baahato inaad ka baxdo? Sidee ayaad u xoojineysaa koritaanka murqahaaga?
Xaqiiqada ah in mid ka mid ah Nolvadex uu yahay in la kordhiyo testosterone jirka ayaa ka dhigaya xulasho sax ah haddii aad rabto inaad kor u qaado tirada muruqyadaada. Tani waxay sameeyneysaa iyada oo loo marayo tallaalka hypothalamus iyo qanjirka pituitary ee maskaxda. Taasi waxay keenaysaa kordhinta wax soo saarka Horumarinta Fool-galka (FSH) iyo sidoo kale hormoonka Luteining (LH), taas oo kor u qaadeysa soo saarida tijaabada baaritaanka testosterone.
Xaalad ahaan, haddii nin uu qaato 20mg Nolvadex muddo toban maalmood ah, heerka testosterone ee dhiigooda waxay u badan tahay inuu kordho 41%. Haddii loo isticmaalo ilaa lix asbuuc, heerarka testosterone waxay u egtahay mid sareeya 84%.
Testosterone waa hoormoon oo wax-soo-saarku ku dhaco dabiiciga. Waxay ka caawisaa hagaajinta suurtogalka borotiinka murqaha, iyo doorarka kale. Waxyaalaha kala duwan ayaa carqaladeeya wax soo saarka testosterone. Si arrintan looga hortago, waxaad isticmaali kartaa Nolvadex si aad u kordhiso soo saarida testosterone.
Daaweynta Cycle Cycle
Nolvadex waa mid ka mid ah SERMs aan lahayn steroidal, taas oo muujinaysa labadaba Estrogenic antagonistic iyo sidoo kale saameynta agonist ee estrogenic ee jirka. Taasi waxay ka dhigan tahay in meelaha qaarkood, waxay keeni kartaa saamaynta estrogenic inta lagu jiro qaar ka mid ah, waxay keeni kartaa saamaynta antiestrogenic. Mid ka mid ah saameynta noocan oo kale ah waa kororka wax soo saarka testosterone. Waxa kale oo ay yareyneysaa saameynta estrogen ee jirka.
Sababtaas awgeed waa in Nolvadex loo tixgeliyaa inuu yahay qayb muhiim ah marka uu rabo inuu qaato daaweynta wareegga dambe. Taasi waa sababta oo ah ka dib markii ay socoto anabolics wareega steroids, waxay u beddeli karaan estrogen. Natiijo ahaan, qofku wuxuu heli karaa nin boobsiis ah, taas oo macnaheedu yahay in guulahaagu aad u qulqulayaan. Iyada oo la xakameynayo estrogen, saameynaha noocan oo kale ah ayaa lagu hayaa qashinka. Heerarka testosterone waxay u badan tahay inay ku noqdaan caadi ahaan natiijada isticmaalka Nolvadex.
Caadi ahaan, Nolvadex ayaa isla markiiba la siiyaa ka dib marka dhammaan steroids anabolic ay ka nadiifiso jirka qofka. Mid waa inuu qaataa maalin kasta 20-40mg afar ilaa lix toddobaad. Qaddar kasta oo ka sarreeya taasi ma bixinayso wax saameyn weyn leh.
Inta lagu jiro PCT, Nolvadex waxaa la wadaagaa ugu yaraan hal ama laba kooxood oo kaneecada dhiirigeliya sida aromatase inhibitor sida HCG ama Aromasin. Faa'iidada iyaga la wada isticmaalo waa in la wanaajiyo saamaynta iyo dhiirigelinta shaqada HPTA.
Si kastaba ha ahaatee, isticmaalka Nolvadex inta lagu guda jiro wareegga, waa in laga fogaadaa haddii aad ujeedo tahay inaad ka hortagto xakameynta testosterone sababtoo ah waxay u badan tahay inayan shaqayn. Taas macnaheedu waxaa weeye in lacagtaada ay hoos u dhigi doonto godka.
Si ka duwan sanooyin ka hor, miisaanka oo lumiya ayaa haatan loo tixgeliyaa mid ka mid ah tikidhada si aad u eegto wanaag. Marka laga reebo qabashada jilbaha, miisaanka oo lumay macnaheedu waa inaad rabto inaad caafimaad qabto. Dumarka dheeraadka ah ee daadihintu waa, si kastaba ha ahaatee, ma aha arrin sahlan. Mid ka mid ah siyaabaha aad ku guuleysan karto safarkaaga miisaankaaga ayaa ah iyadoo loo marayo isticmaalka Nolvadex.
Daraasad lagu sameeyey Natiijooyinka Nolvadex on miisaanka lumiyo waxay muujisay in ay wax ku ool u leedahay inta badan guryaha oo ku lug leh maareynta miisaanka. Guud ahaan, Nolvadex wuxuu xaqiijiyay inuu awood u leeyahay inuu ku caawiyo jirka si uu u gubo dufan badan marka metabolismi uu ku foorarsado. Waxay u horseedaa hawlgal lipolytic ah oo sidaas awgeed korodhka gubashada dufanka.
Iyadoo ay weheliyaan Clinbuterol, waxay u horseedi karaan hoos u dhac dhaqdhaqaaqa lipoprotein kaasoo ah enzme lagama maarmaan ah ee metabolism of triglyceride. Labadaba labadoodaba, waxay u dhaqmi karaan sida miisaan lumis ah. Intaa waxaa dheer, Nolvadex waxaa loo yaqaanaa in la kordhiyo kartida jidhka ee ay ku gubi karto dufanka sidoo kale waxay kordhisaa heerarka tamarta ee muhiim u ah geedi socodka gubashada dufanka.
Waxay xoojisaa habka difaaca jirka
Markaan ka hadleyno nidaamka difaaca jidhka, waxaannu tixraacnaa awoodda aan loola dagaallameyno cudurrada iyo cudurrada. Nolvadex badanaa lama yaqaan, Nolvadex waxay saameyn wanaagsan ku leedahay nidaamka difaaca jirka.
8. Dib u eegista Nolvadex
Alexandra M. ayaa yiri, "Waxaan ku shaqeynayay lixdii bilood ee ugu dambeeyey, isbeddelka jirka ma ahan sidii aan filayay. Waxaan bilaabay raadinta wax aan kor u qaadi lahaa culeyska muruqa, waxaanay degeen Nolvadex. Natiijooyinka Nolvadex waa mid fantastik ah. Baaxaddayda muruqa ayaa si aad ah u kordhay, waxaanan dareensanahay in badeecadani ay tahay in loo mahadceliyo isla sidan. Waxaan ku ammaanayaa qof kasta oo raadinaya muruqyo waaweyn. "
Daawada miisaanka oo lumis ah
Priscilla K ayaa tiri, "Kadib baaritaan badan, waan ogaaday in mid ka mid ah faa'iidooyinka Nolvadex uu yahay miisaan lumis. Anigu ma sugi karno inaan isku dayo, isla markiiba waan ku amrey halkan; Waxaan bartay khariidadeyda hal maalin. Illaa iyo hadda waan ka lumay toban kiilo, mana waligay farxad la igu lahayn. Waxay hadda noqotay daroogada aan miisaanka lumay, iyo asxaabteyda iyo qoyska ayaa doonaya in ay isku dayaan. Dhibaatooyin kale oo aan Nolvadex ka qabay illaa hadda, maaha wax aan ku soo marey markii aan isticmaalay daroogo kale oo miisaanka lumay. Haddii aad rabto inaad daadiso qaar ka mid ah adigoon maskaxdaada iyo wadnahaagu ay dhibaato ku qabaan, markaas Nolvadex waa waxa aad u baahan tahay inaad tagto. "
Leila Wagner waxay tiri, "Waxaan helay miridhkaygii Nolvadex todobaadkii hore. Wondering taas oo mucjiso noqon kartaa? Kadib markii isku dayay in ay uur yeelato tobankii sano ee ugu dambeysey iyada oo aan nasiib laheyn, waxaan ugu dambeyntii ku tijaabiyey si fiican nolvadex, oo hadda waxaan haystaa xidhmo aan farxad laheyn. Ma hubo in aan awoodi karo in aan u qaado waqtiga, waxaan ku faraxsanahay inaan ugu dambeyntii sameeyey. Weli waxaan ku jiraa rumaysad la'aan, waxaanan magacayga ku magacaabay mucjiso. Qof kasta oo isku dayay inuu uuraysto waa inuu Nolvadex isku dayaa inuu isku dayo. "
Dawada ugu fiican ee PCT
Cassie Houston ayaa tiri, "Waxaan amar ku bixiyay ninkeyga sababtoo ah wuxuu bilaabay in uu naasaha horumariyo sababtoo ah isticmaalka steroids. Waxay saameyn ku yeelatay inuu xitaa qaatay fasax jireed sababtoo ah wax laga xishoodo. Libido wuxuu ahaa mid aad u hooseeya, anaguna mar dambe ayaan ku raaxeysaneynay inaan wada jirno. Ka dib markii uu ku jiray sheygan, wuxuu sheegay in natiijooyinka Nolvadex ay tahay mid cajiib ah. Wax walba waa la baddalay, waana uu ku soo laabanayaa caadi ahaan. Muglaha ayaa si weyn hoos u dhacay, oo uu ku laabanayo shaqada. Libido waa mid aad u sarreeya. Waxaan aaminsanahay in tani ay tahay PCT ugu wanaagsan ee ku siin doona tijaabada Testosterone. "
9. Nolvadex iibinta
Waxaa laga yaabaa inaad rabto iibso budada Nolvadex sida daawada PCT ama wax ka qabashada dhalmo la'aanta. Sidoo kale, waxaa laga yaabaa in aad raadineyso inaad yeelato murqo weyn ama aad rabto in aad miisaan ka hesho qaar si dhakhso ah oo sahlan. Su'aasha ugu weyn waa meesha aad ka heli kartid?
Mid ka mid ah su'aalaha caadiga ah ee dadku waydiistaan ​​waa meesha ay ku iibsan karaan budada Nolvadex. Ma aha oo keliya iibsashada, laakiin hel mid ka mid ah tayada wanaagsan iyo qiimo fiican. Iyadoo la tixgelinayo in ay jiraan jidad badan oo internetka ah oo aad ka iibsan kartid, waxaa laga yaabaa inaadan hubin qofka ku siinaya Nolvadex oo ammaan ah.
Si aad u hubiso in aad iibsaneyso waxa saxda ah, waxaad iibsan kartaa iibsashada Nolvadex iibinta naga. Waxaad kaloo iibsan kartaa Nolvadex qiimo cadaalad ah haddii ujeedadu tahay dib u dajin. Waxyaabaha wanaagsani waa in Nolvadex, ma jirto suurtogalnimo ah in la helo calool xanuun ama ka sumo; waa dhab dhab ah Nolvadex.
10. Nolvadex si loogu daweeyo dhalmo la'aanta dheddigga
Dhibaato miyir beelid iyo dareemo diiqad? Kaligaa ma tihid. Tirakoobyadu waxay muujinayaan in hareeraha 7% ee haweenka guurka ah ay qabaan dhibaatooyinka dhalmo la'aanta adduunka oo idil. Hase yeeshee, micnaheedu maahan in haddii qofku qabo dhibaato, marnaba fursad uma yeelan doono inuu ilmahiisa qabsado.
Mid ka mid ah arimaha ugu muhiimsan ee ka qayb qaadashada dhalmo la'aanta waa dhibaatooyinka halsita. Waxaa laga yaabaa in ay sababto syndrom systolic syndrome, taas oo lagu garto hormoon la'aanta hormoon la'aanta ah ee faragelinta ugxanta caadiga ah. Warka fiicani waa daawooyin la siiyay afka ama cirbado kaa caawiya mid soo saaro ukun haddii ay ku haysato wax dhibaato ah. Waxay sidaas darteed, kordhiyaan fursadaha ay ugxan-la'aantu ku dhacdo.
Taasna, mid ayaa ka dhigi kara waqtiga saxda ah ee hagaajinta fursadaha helitaanka uurka. Mid ka mid ah Tamoxifen budada Citrate faa'idooyinka waa in ay muujisay in ay si toos ah u kiciso ugxanta. Sidoo kale, waxay kicisaa ugxan-yaryar si ay u soo saarto dhowr ukumood haddii mid ka mid ah uu soo saarayo mid. Faa'iidada waxaa leh in adeegsigiisu uusan ahayn mid kharash badan oo halis ah sida isticmaalka gonadotropin (daawooyinka uurjiifka la isku mudo).
Clomid waxay ku dhacdaa isla fasalka sida Nolvadex, labadooduba waxaa badanaa loo isticmaalaa daawaynta xanuunka dhalmada ee dumarka aan dhalan. Waxay si isku mid ah u shaqeeyaan oo ay caddeeyeen in ay ka caawiyaan ugxan-galinta xNUMX-65% dumarka. Haseyeeshee, xinjirta, waxay la timaaddaa waxyeelo la mid ah sida khafiifinta qashinka sonkorta ah ee aan awoodin inay uuraystaan. Dhinaca kale, warbixinno ayaa laga soo saaray Nolvadex ee saameynaha ilmo-galeenka.